Otu esi etinye MySQL 8 kacha ọhụrụ na Debian 11 - LinuxCapable
Tuesday, August 24, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa MySQL
Wụnye MySQL 8
Lelee ọkwa nkesa MySQL 8
Chekwaa MySQL 8 na ederede nchekwa
Banye na MySQL 8 atụ
Wepu MySQL 8
MySQL bụ usoro njikwa nchekwa data nwere mmekọrịta dabere na SQL (Asụsụ ajụjụ Structured). Ọ bụ otu n'ime ngwanrọ nchekwa data a na-ejikarị maka ọtụtụ ngwa ama ama nke na-eji ya. A na-eji MySQL maka nkwakọba data, e-azụmahịa, na ngwa osisi, mana njirimara ya kacha eji bụ nchekwa na njikwa nchekwa data webụ.
Debian 11 na-abịa na MySQL na ebe nchekwa ya, agbanyeghị, dị ka ọtụtụ ndị maara, Debian kwụsiri ike na-enye naanị mmelite nchekwa maka mwepụta ya n'usoro na idobe ụlọ ya kwụsiri ike. Nke a nwere nnukwu uru ma ụfọdụ ndọghachi azụ; na nkuzi, ị ga-amụta ka esi etinye MySQL 8 maka Debian 11.
Nkuzi a ga-eji ya wget iwu iji wụnye ngwugwu site na iji iwu a:
Mara, ekwesịrị ịwụnye wget na akpaghị aka mana gbaa iwu iji nyochaa ma ị maghị.
Iji wụnye ụdị MySQL ọhụrụ, ị ga-achọ ibudata na wụnye MySQL APT .deb ngwungwu nke ahụ ga-ahazi ma wụnye ya MySQL ebe nchekwa software dị na gị Debian usoro.
Jiri iwu a dị n'okpuru budata na nke gị TMP nchekwa:
N'oge nrụnye nchekwa MySQL, ị ga-ahụ windo mmapụta ndị a:
Nke mbụ, nyere na Debian 11 ka ewepụtara n'oge nkuzi a, MySQL ga-agwa gị na ọ naghị akwado ntọhapụ ahụ. Enwere ike idozi nke a site na ịhọrọ Buster ntọhapụ kwụsiri ike, nke a ga-arụ ọrụ nke ọma:
họrọ Buster wee pịa igodo tinye:
Nke abụọ, a ga-ajụ gị ka ị kwado ụdị MySQL nke ịchọrọ ịwụnye; maka ugbu a, edobere ya nke ọma maka ụdị kachasị ọhụrụ, yabụ na-eji igodo akụ, gbadaa wee họrọ OK ka ịga n'ihu:
họrọ OK ka ịga n'ihu na nrụnye:
Ozugbo emechara, ị ga-enwetaghachi ozi a na ọdụ gị:
Iji gosi ebe nchekwa ọhụrụ, jiri ihe iwu mmelite dabara adaba:
Ugbu a ị dechara mbubata nke ebe nchekwa MySQL, mebie iwu iji wụnye dị ka ndị a:
Ọmụmatụ nke ndabere nke a ga-etinyekwa:
N'oge nrụnye, popup ọhụrụ ga-apụta, na-akpali gị itinye paswọọdụ mgbọrọgwụ nchekwa data. Gbaa mbọ hụ na echekwara nke a ma dekọọ ya. Ozugbo ịbanye, pịa tinye igodo ma ọ bụ pịa igodo taabụ ka ịhọrọ ya wee pịa tinye ka ịga n'ihu na nrụnye:
Rịba ama, a ga-akpali gị ịbanye ọzọ paswọọdụ mgbọrọgwụ nke ugboro abụọ iji kwado ya.
Na-esote, mpụta ọzọ ga-apụta maka ịgụ gbasara sistemụ nyocha ọhụrụ ahụ.
Ọzọ, tọọ ndabara nhọrọ maka MySQL maka ngwa mgbakwunye nyocha dị ka n'okpuru:
Nwụnye kwesịrị imecha mgbe oge a gasịrị. Iji gosi na etinyere ya nke ọma, mee iwu iwu dabara adaba, nke ga-akwado ụdị ugbu a wee wuo sava nchekwa data MySQL:
Onye nrụnye ga-amalite ọrụ MySQL na-akpaghị aka na ndabara wee hazie onwe ya ka ọ malite ịmalite na buut sistemụ. Iji nyochaa na ọrụ MySQL na-arụ ọrụ mgbe echichi gasịrị, pịnye ihe ndị a systemctl iwu:
Ka ịkwụsị ọrụ MySQL:
Iji malite ọrụ MySQL:
Iji gbanyụọ ọrụ MySQL na buut sistemụ:
Iji mee ka ọrụ MySQL rụọ ọrụ na buut sistemụ:
Ka ịmalitegharịa ọrụ MySQL:
Mgbe ị wụnye MySQL Ọhụrụ, ntọala ndabara ka a na-ewere dị ka adịghị ike site n'ọtụtụ ụkpụrụ ma na-ebute nchegbu maka ike ikwe ka mbubata ma ọ bụ na-erigbu ndị hackers. A ngwọta bụ na-agba ọsọ nwụnye nche script na-abịa na MySQL ndozi.
A ga-akpali gị ịbanye gị mgbọrọgwụ paswọọdụ, na mgbe ahụ ị ga-ahụ ajụjụ gbasara VALIDATE PASSWORD COMPONENT; nke a bụ ka ịtọọ mkpirisi mbanye paswọọdụ; maka ọtụtụ, ndabara dị mma.
Mara, ị na-eji (NA) iji wepụ ihe niile. Ọzọkwa, ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike ịtọgharịa mgbọrọgwụ okwuntughe gị site na ịmepụta nke ọhụrụ; ị nwere ike ịgafe nke a ma ọ bụrụ na-amasị gị dị ka ịtọọla ya n'oge ntinye mbụ na windo mmapụta.
Ugbu a ị dechara edemede nche nrụnye biputere, banye n'ime gị MySQL Enwere ike ime nchekwa data site na iji ihe ndị a:
Maka ndị ọhụrụ na MySQL, iwu niile ga-ejedebe na ";"
Ọ bụrụ na ịchọghị iji nchekwa data MySQL ma chọọ iwepụ ya n'uju, mebie iwu a:
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi etinye MySQL 8 ọhụrụ. N'ozuzu, MySQL 8 nwere arụmọrụ ka mma maka ịgụ / dee ọrụ, ọrụ IO-bound, na nnukwu esemokwu ọrụ. Na mgbakwunye, yana nhọrọ iji bulie maka ibu ọrụ akọwapụtara na ngwaike akọwapụtara site na ịdepụta eriri ndị ọrụ na CPU, ịkpọ aha ole na ole n'ime atụmatụ ọhụrụ ahụ. Ndị ọrụ na ụdị MySQL ochie kwesịrị ịtụle ịkwalite, n'ihi na uru arụmọrụ bara uru.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, MySQL Mail igodo